Lahatsary Seychelles manaitra hahasarika ireo mpitsidika avy any Romania
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Seychelles Madagascar Malgache » Lahatsary Seychelles manaitra hahasarika ireo mpitsidika avy any Romania
Vaovao • Seychelles Madagascar Malgache • Tourism • Vaovao isan-karazany
Ireo mpitsangatsangana avy any Romania dia hankafy ny hafanan'ny Seychelles sy ny hatsarany tsy manam-paharoa tsy lavitra raha toa ka manaitra ny seho fahitalavitra amin'ny volana Oktobra ny sary manaitra ny toerana alehany.
Seychelles hasongadina amin'ny seho malaza ao amin'ny Romanian PROTV La Măruță.
Ny lazan'ny seho dia antenaina hampiakatra ny fahitana sy ny mombamomba an'i Seychelles.
Ny mpijery dia hanana fahitana momba ny nahandro Creole matsiro amin'ny alàlan'ny fifanakalozana fandrahoan-tsakafo mahaliana eo anelanelan'ny chef Marcus Freminot sy ilay mpanolotra ilay fandaharana.
Nisy ekipa iray avy ao amin'ny PROTV an'ny Romanianina tany Seychelles farany teo, naka sary ny zava-nisongadinana - manomboka amin'ny morontsiraka sy ny hetsika ivelany ka hatramin'ny safidy ara-kolontsaina sy fialamboly - izay hasongadina amin'ny seho malaza antsoina hoe La Măruță.
Ilay fandaharana, nalefan'ny PROTV, dia natolotr'i Cătălin Maruță izay avy amin'ny fianakaviana malaza sy malala kintana amin'ny fahitalavitra avy any Romania. Ny lazan'ny seho dia antenaina hampiakatra be ny fahitana sy ny mombamomba an'i Seychelles eo amin'io tsena io rehefa milatsaka ny ririnina ary manonofy fandosirana tonga lafatra any an-toerana mafana sy manasa toy ireo nosy kely any amin'ny Ranomasimbe Indianina ny rehetra.
Hahafantatra tsara ny nahandro Creole matsiro ny mpijery amin'ny alàlan'ny fifanakalozana fandrahoan-tsakafo mahaliana eo anelanelan'ny chef Marcus Freminot sy ilay mpanolotra fandaharana, Andreea Dociu, izay amboariny lovia nentin-drazana avy amin'ny fireneny avy.
Chef Freminot dia manolotra trondro nendasina amam-bava miaraka amina saosy Creole, ary koa kariosy akoho sy manga mangahazo, ary i Dociu kosa mpanolotra sakafo miaraka amina lovia lehibe sy matsiro vita amin'ny polenta (voninkazo), fromazy parmesan, bacon sy atody.
Voafantina manokana, ny lovia dia hanaitra ny tsiron'ny mpandeha, mitaona azy ireo handeha any Seychelles mba hanandrana ho azy ireo ny tsiro mahavariana sy mahery ao amin'ilay toerana.
Niroso tamin'ny fitsidihana ny Mahé ihany koa ny ekipazy, fakana sary ireo traikefa tsy manam-paharoa eo an-toerana izay tsy tratran'ireo mpizahatany. Nitsidika ny Trois Frères Distillery tao amin'ny La Plaine Ste André izy ireo mba hianatra ny tantara mahaliana ao ambadiky ny Takamaka Rum novokarina tany an-toerana ary handraisana anjara amin'ny fanandramana ronono mahafinaritra.
No fialantsasatra any Seychelles dia vita tsy misy 'hopping island' ary ny PROTV dia hitondra ny mpijery traikefa niaingany nankany Praslin tamin'ny alàlan'ny rivotra sy ny dia an-dranomasina nankany amin'ny nosy La Digue akaiky.